लकडाउनमा २०० किलोमिटर पैदल हिँडेर ज्यान गुमाउने रणवीरले अन्तिम पटक फोनमा यसो भनेका थिए ! – Khabar PatrikaNp
लकडाउनमा २०० किलोमिटर पैदल हिँडेर ज्यान गुमाउने रणवीरले अन्तिम पटक फोनमा यसो भनेका थिए !
August 9, 2020 293
नयाँ दिल्ली। ‘मेरो दुखिरहेको छ, मलाई लिन आउन सक्छौ भने आउ…’ यी शब्द ती व्यक्तिको अन्तिम फोन कलका हुन् जसको मृत्यु दिल्लीबाट पैदल हिँडेर मध्य प्रदेश जाँदै गर्दा आगरानजिकै भयो ।
रणवीर सिंह नामका यी व्यक्ति दिल्लीमा डेलिभरी म्यानको रुपमा काम गर्थे । तर, लकडाउन भएपछि दिल्लीमा खानपिन र बस्न समस्या भएपछि उनले आफ्नो गाउँ जाने निर्णय गरेका थिए । तर कुनै साधन नपाएका कारण रणवीर सिंह पैदल नै आफ्नो गाउँतिर अघि बढ्न सुरु गरे ।
मृत्युको रात के भएको थियो ?
मृत्युभन्दा अघिल्लो रात रणवीर सिंहले आफ्ना केही साथीहरुसँग मिलेर घर जाने फैसला गरेका थिए । तर बसहरु नचलेका कारण रणवीर सिंहले पैदल हिँड्न सुरु गरे । दिल्लीबाट दिँडेर फरिदाबाद पुग्दै गर्दा रणवीरले राती साढे ९ बजे बहिनी पिंकीसँग फोनमा कुरा गरे ।
पिंकी भन्छिन् ‘मैले त्यो दिन अचानक नै दाईलाई फोन गरेकी थिएँ । उहाँले भन्नुभयो कि उहाँ घर आउँदै हुनुहुन्छ किनकि लकडाउनका कारण काम सबै रोकिएको छ र पैदल आउँदै हुनुहुन्छ । मलाई यो सुनेर निकै अनौडठो लाग्यो ।’
प्रिकीका अनुसार दाजुसँग कुरा गरेपछि उनी औषधी खाएर सुतिन् । बिहान उठेपछि सबैभन्दा पहिले लगभग ५ बजे उनलाई दाजुलाई फोन गरिन् । पिंकी भन्छिन् ‘यो कलमा उहाँले भन्नुभयो कि उहाँको छाती दुखिरहेको छ । मैले उहाँसँग भनें कि तयाइँ कहीँ बस्नुहोस् त्यतिबेलाम्म म कसैलाई फोन लगाउँछु ।’
रणवीर सिंह दिल्लीबाट मथुराको बाटो हुँदै बिहानै आगरा पुगिसकेका थिए । त्यतिबेलासम्म रणवीर निकै थाकिसकेका थिए । बाटोमा केही किलोमिटरको लागि उनले ट्रेक्टर पनि पाए तर उनले एउटा लामो दूरी पैदल हिँडेरै पार गरे । रणवीर सिंह यो बाटोमा एक्लै हिँडेका पनि थिएनन् । उनीसँग उनको उमेरका कैयौं युवा, पाका र बालबालिका पनि थिए ।
रणवीर सिंह दिल्लीको एक रेष्टुरेण्टमा डेलिभरी म्यानको काम गर्थे । उनीसँग उनका एक आफन्त अरविन्द पनि बस्थे । अरविन्द तिनै व्यक्ति हुन् जसले रणवीरसँग अन्तिम पटक फोनमा कुरा गरेका थिए । तर अरविन्द त्यो पूरै रात रणवीरको सम्पर्कमा रहे ।
Prevदक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन! – हेर्नुहोस् साउन २६ गते सोमबारको राशिफल
Next१७ बर्षिया युवतीले बच्चा जन्माएर फाल्नुको भित्री रहस्य यस्तो रहेछ ( भिडियो हेर्नुहोस् )
भारतबाट आयत गरेर लक्ष्मीपूजाका लागि लोडसेडिङ हुन नदिने : निमित्त कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य
कोरोना भाइरसबाट नेपालीको मृत्युदर कम हुनुको वैज्ञानिक कारण
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !!
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (34289)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (34104)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33533)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (29134)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27528)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25315)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22671)
एका बिहानै बिसाल नाग देवताको दर्शन सँगै ॐ लेखेर एक Share गर्नुस सात दिनभित्रमा तपाइले सोचेको काम बन्नेछ (21293)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20281)
होसियार ! क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउँछ यी ५ खानाको बढी सेवन गर्नाले (19619)
वडाध्यक्ष को बाइकमा आएका नेकपा कार्यकर्ताले खुँ’डा हा’नेर ह’त्या गरे अमृतको
५ महिनाकाे शिशुमा देखियाे एसएमए राेग, खोपको मूल्य नै २५ करोड